Izincwadi ze-French Revolution
Isihlokwana saseFrance Revolution #1
Isihlokwana saseFrance Revolution #2
Isihlokwana saseFrance Revolution #3
Isihlokwana saseFrance Revolution #4
Isihlokwana saseFrance Revolution #5
Isihlokwana saseFrance Revolution #6
Imibhalo eyisihlubuki yaseFrance
Imibhalo yaseFrance Revolution
Imibuzo yase-French Revolution
Isichazamazwi sesiFulentshi saseFrance i-AK
Isihumushi samaFulentshi saseFrance i-LZ
Ihluzo zaseFrance Revolution
Izazi-mlando zaseFrance Revolution
Amamephu we-French Revolution
Imibuzo yememori yesiFulentshi Revolution - imicimbi 1789-91
Imibuzo yememori yesiFulentshi Revolution - imicimbi 1792-95
Imibuzo yememori yesiFulentshi Revolution - imicimbi eya ku-1788
Imibuzo yememory French Revolution - amaqembu
Imibuzo yememory French Revolution - imibono
Imibuzo yememory French Revolution - abaholi
Imibuzo yememory French Revolution - imigomo (I)
Imibuzo yememory French Revolution - imigomo (II)
Imibuzo yememory French Revolution - imigomo (III)
Quizzes French Revolution inkumbulo
Imibuzo yeFrench Revolution #1
Imibuzo yeFrench Revolution #2
Imibuzo yeFrench Revolution #3
Imibuzo yeFrench Revolution #4
Imibuzo yeFrench Revolution #5
Imibuzo yeFrench Revolution #6
Imibuzo yemibuzo yaseFrance yabaqalayo
Quizzes French Revolution
Isihloko saseFrance Revolution
French Revolution inhlebo
French Revolution ubani
French Revolution izwisearch - imiqondo
French Revolution izwisearch - imicimbi
French Revolution izwi - isazi - abantu
I-French Revolution izwisearch - izindawo
French Revolution amazwi
I-French Revolution cishe yonke into esiyihlanganisa nezinguquko - izimbangi ezihlukumezanayo, izishoshovu ezifuna izikhundla, izintela eziphakeme, ukuvuna okuhluleka, ukusweleka kokudla, abalimi abalambile, abantu abasedolobheni abathukuthele, ubulili, amanga, inkohliso, udlame lwezixuku, udlame kanye nokuqina, amahlebezi nokuvukela umbuso nemishini yokunquma ikhanda.
Noma kungeyona inguquko yokuqala yenkathi yesimanje, iFrench Revolution isibe isilinganiso lapho ezinye izinguquko zibalwa khona. Isiphithiphithi sezombusazwe nezenhlalo yezwe nge-18th century iFrance ifundwe yizigidi zabantu - kusuka kwizazi kuya kubafundi abasesikoleni esiphakeme. The isivunguvungu seBastille ngoJulayi 14th 1789 isibe ngesinye sezikhathi ezichazayo zomlando waseNtshonalanga, isisusa esiphelele sabantu ekuguqukeni. Amadoda nabesifazane bezinguquko eFrance - Louis XVI, Marie Antoinette, I-Marquis de Lafayette, Hlonipha uMirabeau, UGeorges Danton, UJean-Paul Marat, Maidilien Robespierre nabanye - kufundiwe, kwahlaziywa futhi kwahunyushwa. Abalando-mlando basebenzise isikhathi esingaphezu kwamakhulu amabili behlola uMguquko WaseFrance, bezama ukunquma ukuthi ngabe bekuyinsika yenqubekela phambili noma ukuzalwa kobuhlanga.
Ekubonakaleni kokuqala, izimbangela zoVukelo lwaseFrance zibonakala ziqonde. Ngasekupheleni kwekhulu le-18th, abantu baseFrance babekezelele amakhulu eminyaka yokungalingani okukhulu kanye nokuxhashazwa. Isikhundla esiphakeme senhlalo sasidinga i- Indawo Yesithathu, abajwayelekile besizwe, ukwenza umsebenzi wabo ngenkathi bethwele umthwalo wentela. Inkosi yayihlala yodwa e-Versailles, yakhe uhulumeni wobukhosi ngokuphelele emibonweni kodwa engaphatheki ngokoqobo. Umgcinimafa kazwelonke wawucishe awunalutho, udonswa ngokuphathwa budlabha, ukungasebenzi kahle, inkohliso, imali esetshenzisiwe kanye nokubamba iqhaza ezimpini zakwamanye amazwe.
Ngasekupheleni kwe-1780s, ongqongqoshe benkosi babefuna ngamandla ukwenza izinguquko kwezimali. Okwaqala njengokuphikisana ngezinguquko zentela ezihlongozwayo maduze kwangena ekuguqukeni kwezepolitiki nakomthethosisekelo. Ukuxabana e Amanani-Jikelele maphakathi ne-1789 kwaholela ekusungulweni koMkhandlu Kazwelonke, owokuqala wohulumeni bezinguquko abaningana. Lemicimbi, ngaphandle kwezinsongo noma ukuchitheka kwegazi, iphakamise ukuthi ukuguquka kwamandla ngokuthula kungenzeka. Kumaviki ezayo, igagasi lodlame oludumile - eParis, emaphandleni futhi eVersailles uqobo - Kubhalwe ekuguquleni kwegazi okuzayo.
Iwebhusayithi ye-Alfa yaseFrance Ye-Revolution ingumthombo osezingeni eliphezulu wokufunda okwenziwe eFrance kuma-1700s sekwephuzile. Kuqukethe imithombo ehlukene eyengeziwe neyisisekelo ye-500, efaka nemininingwane izihloko ezifingqiwe, amadokhumenti futhi izethulo zesithombe. Iwebhusayithi yethu futhi iqukethe izinto ezibhekisela kuzo ezifana amabalazwe futhi amamephu emiqondo, izikhathi, glossaries, a 'ubani kanye nolwazi pa umlando futhi izazi-mlando. Abafundi bangaphinde bahlole ulwazi lwabo futhi bakhumbule ngohlu lwezinto ezenziwa online, kufaka phakathi kwakha, emaphazili futhi ukubekwa kwamagama.
Ngaphandle kwemithombo eyinhloko, konke okuqukethwe Kumlando we-Alfa kubhalwe ngothisha abaqeqeshiwe, ababhali nezazi-mlando. Imininingwane engaphezulu kule webhusayithi kanye nabanikeli bayo kungaba utholwe lapha.
Ngaphandle kwemithombo eyinhloko, konke okuqukethwe kule webhusayithi © I-Alpha History 2018-19. Lokhu okuqukethwe akunakukopishwa, kuphinde kushicilelwe kabusha noma kusatshalaliswe kabusha ngaphandle kwemvume ebonakalayo yomlando we-Alfa. Ngemininingwane engaphezulu ngokusetshenziswa kwewebhusayithi ye-Alfa's History nokuqukethwe, sicela ubheke kithi Imigomo Yokusebenzisa.
Lesi siza seFrance Revolution siqukethe izindatshana, imithombo kanye nemibono ngezigameko ezenzeka eFrance phakathi kwe1781 ne1795. Lesi siza sakhiwa futhi sagcinwa ngumlando we-Alfa. Inamagama we-228,547 kumakhasi we-353 futhi yagcina ukuvuselelwa ngoJulayi 31st 2019. Ngeminye imininingwane, vakashela ikhasi lethu le-FAQ noma imigomo yokusebenzisa.